Zvikumbiro zveMacOS zvakapihwa paWWDC 2017 yekugadzirwa kwavo | Ndinobva mac
Sekuziva kwedu, vhiki rino iyo Apple Developer Musangano iri kuitika muSan José, California. Chiitiko ichi, chakatanga nezwi rakakosha neMuvhuro, Chikumi 5, Icho chimwe chezviitiko zvakakura pane zvemagetsi zvinoshandiswa nemidziyo pasi rose, uye zvese izvi zvine hukama neApple software uye zvigadzirwa zvayo.
Chimwe chezviitiko zvakatanhamara gore rega rega ndicho Apple Dhizaini Mubairo, iyo mibairo iyo Apple inoziva akanakisa mashandisiro nemitambo maererano nehunyanzvi, dhizaini uye zvinoshandiswa. Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti mizhinji yemubairo inoenda kune kunyorera kweanosungirwa maIOS, gore rega rega kumwe kunyorera kweiyo macOS ecosystem inopinda mukati.
Nekudaro, gore rino, Apple Dhizaini Mubairo ivo havana kunge vaine huwandu hwakawanda semamwe makore. Chiitiko chave chakati wandei uye zvine runyerekupe kuti inogona kunge iri yekupedzisira WWDC kupihwa mibairo yakadaro. Iva zvazvingaite, rondedzero yevakakunda iyo software inowanikwa yeMac iri seinotevera:
Bear (Chikumbiro cheItaly) chakashongedzwa korona senge yakanakisa kunyora uye zvinyorwa zvemunyori paMac App Store Kutenda kuhuwandu hwezvinhu zvainazvo uye nekugadzirwa kwayo kwakangwarira, chishandiso ichi chakashongedzwa korona seimwe yeakanakisa gore rino. Ndiwo wega wevakakunda wakasununguka. Inowanikwawo kune zvishandiso zveIOS.
Zvinhu 3 (ChiGerman app) ndiyo anonyatso kuzivikanwa maneja maneja akazopedzisira avandudzwa, mushure memakore mashanu, uye akahwina mubairo uyu. A classic kubva kuMac App Store yatisingakwanise kupotsa. Zvakare inowanikwa kune ese maApple madivaysi uye yeApple Watch.
AirMail 3 (App yeItaly) ndiyo Maneja maneja par kugona mune macOS zvishandiso, pamwe neIOS uye munguva pfupi yapfuura, watchOS. Iyo ndeimwe yeanonyanya kuzadza mafomu mu "Chitoro" uye nekuda kwekubatanidzwa kwayo uye maficha ayo aanopa, iko kunyorera kunozadzisa basa raro zvakakwana. Uye zvakare, dhizaini yayo inotibvumidza kushandisa maawa tichiishandisa tisingazvizive. Zvakareruka. Mutengo wacho ndeye € 10,99 muMac App Store.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Zvikumbiro zveMacOS zvakapihwa paWWDC 2017 yekugadzirwa kwavo
Gadzira mifananidzo yakawanda yehunyanzvi uye yekutanga neFoto Focus